Gammadoo Jamaal: Biyya hambaatti fiilmii Afaan Oromoo - BBC News Afaan Oromoo
Biyya kanatti wanti salphaadha jedhee yaadu, baqataa jedhamee waamamuu qofa dha.
Gammadoo Jamaal jedhama. Maatiisaa waliin ta'uun erga biyyaa baqatanii bahanii bubbulaniiru. Sababa abbaan isaa gama siyaasaatiin biyya keessatti dararamni irra gahaa tureef, isaafii abbaasaa dabalatee, maatiisaa jaha waliin baqatanii Keenyaa galan.
Achiis takka bubbulanii gara Yugaandaa, itti aansuunis gara biyya amma keessa jiraatan Osloo, Norweey godaanan.
Yeroo ammaa qopheessaa fiilmii Afaan Oromoo tahuun kan dalagu dargaggoo Gammadoon, BBC waliin turtii taasiseera. Hordofaa.
Image copyright GAMMADO JAMAL
Ijoollummaarraa eegalee aartiidhaaf, keessattuu aartii fakkiif fedhii guddaa akka qabu dubbata Gammadoon.
Kana malees, ''hawaasa keenya keessatti hanqinni aartii fiilmii waan jiruuf, qaawwa sana duuchuuf kaka'uun jalqabe,'' jedha.
Oogummaa filmii kanneen akka kaameeraan waraabuu, suur-sagalee gulaaluu fi daayireektiingii mana barnootaa Noorweeyitti argamu keessa galee barate.
''Maatiin koo hedduu na jajjabeessu turan,'' kan jedhu Gammadoon, keessattuu abbaan isaa fedhiisaa kana guddoo akka deeggaran ibsa.
Goodayyaa suuraa ''Waan itti amante kophaa kee dhaabattus, ittii hin dhiisin' naan jedha ture,''
''Saba kootiif dhugaan akka hojjedhu natti hima. 'Waan itti amante kophaa kee dhaabattus, itti hin dhiisin' naan jedha ture,'' jechuun oolmaa abbaasaa hedduu galateeffata.
Aartii Oromoo biyya hambaatti
''Meeshaa fi beekumsi biyya alaarraa argattu hedduu dha,'' kan jedhu Gaammadoon, ''Rakkoon inni guddaan taatota fiilmiirra hojjetan argachuudha,'' jedha.
Yeroo tokko fiilmii guutuu waraabanii erga xumuranii booda, taateen tokko keessaa bahuun, fiilmii sana akka haaraatti jalqabuun waraabuusaa 'takkaa hin dagadhu,'' jedha.
Kun osoo isa danquu baatee, fiilmiiwwan hedduu oomishuu akka danda'us dubbata.
Hudhaalee kanaa fi kanneen biroo keessa kutannoon darbuun hanga yoonaa fiilmiiwwan Afaan Oromoo jahaa fi kiliippiiwwan hedduu dalageera. Kanneen keessaas fiilmiiwwan 'Amaanaa' fi 'Cabsaa' jedhaman, daawwattoota biratti fudhatama gaarii argataniiru.
Fiilmoonni isaas harki caalu kan irratti xiyyeeffatan haala uummanni Oromoo wayita ammaa keessa jiruurratti wayita ta'u, dhimmoota biroos keessatti hammatu.
Kana malees, Gammadoon akka itti waa hojjetan (tutorials) viidiyoon waraabuun Afaan Oromoon marsariitiirra gadhiisa. Isaan kunis oogummaa suuraa, viidiyoo waraabuu, gulaaluu fi daayreektiingii irratti xiyyeeffatu. Dargaggoota aartii keessa seenuu barbaadaniifi akka waliigalaatti hawaasa Oromoof kan qophaa'aniidha.
Osoo naa milkaa'ee, gara biyyaa deebi'uun aartii fiilmii dagaagsuun barbaada kan jedhu dargaggoon kun, ''Artiistoota Oromoo biyya keessa jiran gama hundaanuu gargaaruu nan barbaada,'' jedha.
''Guyyaan kaleessaa har'a miti, har'i ammo boru hin ta'u,'' jedhee kan mammaake Gammadoon, sadarkaan aartii Oromoo yeroo ammaa irra jiru, jijjiiramaa jira jedha.
Haa ta'u malee, akka addunyaa fi akka afaanota birootti wayita ilaallu, guddateera jechuu hin dandeenyu jedha.
Sababni kanaas jedha Gammadoon, ''Itiyoophiyaa keessa afaaniifi aadaa keenya akka hin dagaagsineef baroota hedduuf cunqurfamaa turuu keenya waliin wayita ilaallu, hedduu duubatti hafneerra jedhee hin yaadu,'' jedha.
''Fiilmii fi aartiin Oromoo yeroo dhihootti sadarkaa isaa kan eeggate akka ta'u abdii guddaan qaba,'' jechuun BBC'f himeera.
Kana malees gamasaatiin fiilmii Afaan Oromoo haaraa qopheessuurra akka jiruus nutti himeera. ''Fiilmiin kun sadarkaawwan fiilmii kanaan dura hojjedheerraa sadarkaa tokko kan olka'e akka ta'u waanin barbaadeef, akka gaariitti miidhagsaan jira,'' jedha.
''Biyya ormaatti sammuun gabroomu, sammuunis bilisoomu,'' kan jedhu dargaggoon kun, ilmi namaa wayita addunyaa kanarra jiraatu, nageenyaa fi bilisummaatu isa barbaachisa jedha.
Biyya ormaa amma Gammadoon keessa jiru, gariin bilisummaan haa jiraatu malee, gariin biyya akka yaadu dubbata.
''Biyyi ofii yeroo hundumaa haadha. Biyya ormaa keessaa waanin argadhe jedhu yoo jiraate, baqataa jedhee waamamuu qofa,'' jechuun goolaba.
''Har'a moo boru, yooman biyya gala,'' jedhee yeroo hunda akka yaadus nutti himeera.
Guyyaa tokkoos akka milkaa'u ni abdata.
Ambootti boombii namoota paartii badhaadhinaa deggeruuf ba'an irratti darbameen 29 miidhaman
Kooriyaan Kibbaa koronaavaayirasiirratti of eeggannoo ol'aanaan akka taasifamu labsite
Weellistuun Sa'uudii viidiyoo muuziqaa hojjetteef hidhaan ishee mudate
Hoogganaan garee mormituu Sudaan Kibbaa Pirezidaantii Itti Aanaa ta'uun kakuu seenan
Lammiin Ameerikaa waan nama rifaasisu hojjetee gammaduun beekamu balaa rokeetiitiin du'e
Raashiyaan waa'ee koronaavaayiras odeeffannoo sobaa tamsaasuushee haalte